Codsiyada ugu fiican ee kaa caawinaya inaad la kulanto asxaabtaada | Ragga Stylish
Hadaad udhaxeyso dadka inta badan aan ka warqabin waxa ka socda hareerahooda, waxaa la joogaa waqtigii aad toosi lahayd. Si aad kulamo ula sameysato asxaabtaada waxaa jira barnaamijyo badan.
Si aad u sameyso qorshooyinka, wac kulamada asxaabtaada, oo buuxi gurigaaga ama xafladaha martidaada, waxaa jira codsiyo kala duwan.
1 Man uted
2 Diyaarad Diyaaradeed
5 Inta imaaw
Mashruucani wuxuu ku saleysan yahay maareynta dhacdooyinka Facebook. Iyada, waxaad si dhakhso leh u qaabeyn kartaa howlaha isla markaana u dir casuumaadaha asxaabta. Xidhiidhadaadu maaha inay dalabka soo dejiyaan, waxay heli doonaan oo keliya farriin xaqiijin ah. Markay timaado maalintii lagu heshiiyay, waxaad heleysaa digniin si ay kuu xasuusiso.
Codsi aad u dhameystiran oo ku saabsan abaabulka xafladaha. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa dhammaan noocyada yutiilitida. Waxaad awoodi doontaa inaad naqshadeyso oo aad qorsheyso goobta dhacdada, goobta uu saaxiib kasta fariisto, iwm. Waxaad sidoo kale habeyn kartaa dirista digniinta si aan waxba loo ilaawin. Xitaa waxaad leedahay ikhtiyaarka kharashyada qorshaynta.
Barnaamij kale oo fikrado kuu ah si aad ula kulanto asxaabtaada, hel meelo lagu kulmo, iwm. Xitaa waxaad ka iibsan kartaa tikidhada dhexdeeda, magaalooyinka waaweyn ee Spain.
App leh karti badan. Xiriiro badan iyo xaflad weyn ayaa lagu abaabuli karaa iyada oo loo marayo. Adiga ayaa soo jeedinaya kulanka iyo iyaga Way cod bixin karaan haddii ay jecel yihiin waxqabadka, goobta, maalinta, waqtiga. Waxay sidoo kale si toos ah ugu xaqiijin karaan iyagoo ku qoraya faallo sheekada.
Se iyadoo lagu saleynayo deegaan. Haddii ay waxtar leedahay in lala kulmo asxaabta meel kasta, abaabulo jidadka, iwm. Mawqifka asxaabtaadu wuxuu ka muuqdaa khariidada waqtiga dhabta ah iyo hab madadaalo leh avatar shaqsiyan ah.
Barnaamijyada kale ee ugu caansan adduunka waa Foursquare. Waxay ku siineysaa adiga suurtogalnimada helitaanka dhammaan noocyada waxqabadyada iyadoo loo eegayo mawqifkaaga iyo dookhaaga. Waxay sidoo kale kugula socodsiineysaa isbeddelada bisha waxaana ku jira fikradaha isticmaaleyaasha iyo qiimaha qorshe kasta.
Ilaha sawirka: YouTube
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Teknolojiyadda aad kula kulanto saaxiibbadaa